Accueil > Gazetin'ny nosy > Covid-19 : Lasibatra Ambohitsorohitra sy Mahazoarivo
Covid-19 : Lasibatra Ambohitsorohitra sy Mahazoarivo
Niarahana mahalala fa ny minisitrin’ny Fiarovam-pirenena ny Jeneraly Rakotonirina Richard dia nalefa any amin’ny Nosy La Réunion ny herinandro lasa teo iny noho ny fahitana soritr’aretina taminy momba ny COVID-19. Ny governora ny faritra Analamanga ingahy Rasoamaromaka Hery dia nalefa any amin’ity nosy ity koa noho ny aretina ity ihany. Raha ny loharanom-baovao mandeha amin’izao fotoana izao dia ao amin’ny hopitaly nitsaboana ilay mpandraharaha karana mizaka ny zom-pirenena Malagasy antsoina hoe Barday no itsaboana ireo olona ambony ireo. Ity mpandraharaha karana ity izay maty tamin’ny herinandro lasa iny.
Raha ny loharanom-baovao azonay hatrany dia fantatra izao fa miparitaka ao amin’ny lapa ao Ambohitsorohitra ao ny aretina ity. Tale telo no voalaza fa voan’ny covid-19 ity ary misy mpiasa vitsivitsy ihany koa. Tsy ny ao Ambohitsorohitra ihany nefa no voalaza fa ny any Mahazoarivo koa. Maro koa ny olona voalaza fa mitondra ireo otrik’aretina.
Ny loharanom-baovao hatrany no milaza fa misy minisitra hafa ihany koa voa nefa dia notsaboina eto Madagasikara ihany izy ireo. Efa misy ny nivoaka ny hopitaly ary mbola misy ny manao fitsaboana amin’ny dokotera tenany.
Matoa ny toerana toa ireny no efa iparitahan’ny valanaretina ity dia azo inoana fa efa miparitaka amin’ny toerana maro izy ity amin’izao fotoana izao. Ny tarehi-marika ôfisialy mikasika ny fivoaran’ity aretina ity ny alatsinainy faha 15 martsa 2021 teo dia mampatahotra be ny fivoarany satria tamin’ny olona 883 izay nanaovana fitiliana dia nahitana 101 no mitondra ny aretina. Ny 99 amin’ireo olona ireo dia marary-be. Nisy iray maty tamin’izany.
Tsy ny eto Andrenivohitra ihany no tena voa mafy ankehitriny fa ny faritra maro ihany koa. I Toliara renivohitra dia isan’ny voa mafy ary nanao fanambarana tamin’ny haino aman-jery ny ben’ny tanàna ao amin’ity toerana ity mba samy hitandrina ny tsirairay. Fantatra fa nisy mpampianatra teny amin’ny oniversite koa no maty voaktrin’ny covid-19 ary efa nalevina any Fianarantsoa any amin’ny tany nihaviany ny faran’ny herinandro teo. Toerana maro eto Madagasikara no efa iparitahan’ny aretina amin’izao fotoana izao.
Hatramin’izao fotoana izao aloha dia mbola tsy misy ny filazana na ilay COVID-19 vaovao avy any Afrika atsimo na ny avy any angletera no mahazo an-tsika izao na mbola ilay niseho tamin’ny taona 2020 iny ihany.
Mihorohoro ny olona rehetra ankehitriony ary mitebiteby to any sahobakaka ambody riana.